ကိုနေတိုးနဲ့ကိုကျော်ကျော်ဗိုလ်သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုနေတိုးနဲ့ကိုကျော်ကျော်ဗိုလ်သတင်း
Posted by thurein on Jul 11, 2011 in Copy/Paste | 27 comments
has written3post in this Website..
View all posts by thurein →
True Answer says:
ဟာ လုပ်ပြန်ပြီ။ ကျော်ဟိန်းသတင်း လိုပဲ….သတင်းဖတ်ရမလားအောက်မေ့တယ် သူတို့ကချည်းမေးနေတော့တာပဲ။
ကိုယ့် ဂျီးဒေါ် သားသမီးလဲမဟုတ်ပဲနဲ့
ပြောရ မကောင်းရှိတော့မယ် …။။။
အေးလေ ဟုတ်တယ်…. သတင်းများဖတ်ရမလား လို့ အား၇ပါးရ ၀င်မိပါတယ် …
ပြန်မေးနေတယ် ….. နောက်တခါ ဒီလို မျိုးတွေ မတင် အောင် ကန့်ကွက်ပါတယ် ….။
ဘာမှမဟုတ်တဲ. သတင်းတွေ မေးစာတွေ တင်တာတွေ တွေ.နေရတယ်
သိချင် နေတိုး နဲ. ကျော်ဗိုလ် ဖုန်းနံပါတ်ဆက်မေးပါလို. အကြုံပြုလိုပါတယ်
ဘာမဟုတ်တဲ. ပို.စ်တွေအတွက် သူကြီးပိုက်ဆံတွေကုန်နေလို.
အနော်တို.ကိုမပေးနိုင်လို.ကတော. ကျွန်တော်ရွှေဘိုသားနဲ. တွေ.မယ်နော်
login လုပ်ထားရင် ဖိုရမ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်..။
နေတိုးက.. စင်္ကာပူမှာလို့ထင်တယ်..။ ပြန်များရောက်ပြီလားမသိ..။
ဆရာခိုင် ကျွန်တော် login လုပ်ထားတယ် မျက်လုံး မကောင်းလို့များလားမသိ ဖိုရမ်ဆိုတာကြီး မတွေ့မိဘူး ဘယ်လိုရှာရမလဲ လုပ်ပါဦးဗျ
Dashboard မှာ ကြည့်ရင်..တွေ့နိုင်ပါတယ်..။
Forum လို့တွေ့တာကိုသာ ကလစ်လုပ်လိုက်ဗျာ…။ ထပ်ပွင့်လာလိမ့်မယ်..။
ဖိုရမ် ဆိုတာကြီးကို ၀င်သွားရင် တော်တော် နှေးနေတယ်.. နည်းဗျူဟာလေး ဘာလေး နည်းနည်း ပြောင်းပါအုန်း။
gtalk ထဲ ကနေ တလှည့် စီ ဆဲ ပြီး ရန်ဖြစ်နေကြတာ ပါ။
သူ တို့ ဘာသာ ဘာဖြစ်ဖြစ် အခုလောလောဆယ် ကိုယ်ကတော့ ယူပြီ၁၀ ။
ဘာလုပ်ဖို့လဲး။ နိုင်တဲ့သူကို ခင်ဗျားကြီးတော်နဲ့ပေးစားမလို့လား။
တကြောင်းထဲနဲ့ ပို့စ်ဖြစ်တယ် … ။ မှတ်သားလောက်ပါတယ်
Yin Nyine Nway says:
လာပြန်ပြီးတစ်ယောက်… ဘာများလဲလို့။ သိတော့ကော ဘာလုပ်ပေးမလို့လဲ စပ်စပ်စုစုရှင်။ အချိန်တွေအားနေတယ်ထင်ပါ့….
နေတိုးကျော်ကျော်ဗို သတင်းဆိုတာ….. နေတိုးနဲ့ ကျော်ကျော်ဗို ယောက်ကျားချင်း ဟိုဟာဒီဟာလုပ်တဲ့ ပုံတွေ အင်တာနတ်ပေါ်လား ဘယ်မှာလားမသိပျံ့နေလို့တဲ့..။ ကျော်ကျော်ဗို ညီကတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ရှင်းသွားတာပဲ..။ သေချာတာက နေတိုးက နည်းနည်း ခြောက်နေတယ်။ အရင်က ထွန်းထွန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ တတွဲတွဲပဲ..။ ချုပ်ရရင် တော့ အခြောက်ဇာတ်ပါပဲ။ ကဲနောက်ဆို ဒီလို မမေးနဲ့တော့ မကြိုက်ဘူး။ အလိမ်ခံရသလိုခံစားမိလို့ပါ။ ဘာသတင်းများလဲလို့ဖတ်မိတာ ကိုယ့်ကပြန်ပြောရတာတော်တော်တင်းတယ်။ ဒါပဲ။
အဲ့ဒါ တကယ်ကြီးလားဟင် .. အဲ့ဒီသတင်းကြားတာ တော်တော်ကြာပြီ ။ ပုံတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူး ။နေတိုးက ကောင်လေးချောချောလေးတွေနဲ့လို့ သတင်းကြားတယ် ။ အခုလည်း ကျော်ကျော်ဗိုက ကလေးနဲ့မိန်းမရှိတာကို တကယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ ……. သေပြီဆရာပဲ
အေးလေကွာ နေတိုးက အဲလိုကြီးလား ဟင်
၂ ဖက် ချွန်ဆိုရင်တော့ ….
၃ ဖက် ချွန်ဖြစ်ခဲ့ရင် …..
ပို့စ် တစ်ပုဒ်ကို ခေါင်းစဉ်နဲ့ လုပ်စားတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒီနေရာကနေ အယ်ဒီတာတွေကို တစ်ခု တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ အယ်ဒီတာများအနေနဲ့ တောင်းဆိုစရာများ ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်တပုဒ်ရေးပြီး ရွာသားများကို တောင်းဆိုစရာရှိရင် ထိုပို့စ်မှာ ကော်မန့် ပေးပြီး တောင်းဆို သင့်ပါတယ်။ ခုတော့ ခေါင်းစဉ်ကို ပြပြီး စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်တာက ပို့စ်လာဖတ်တဲ့ သူတွေကို စော်ကားရာ ရောက်ပါတယ်။ ခုပို့စ်က တကယ်ပဲ သိချင်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ပို့စ်တစ်ခု အနေနဲ့ တင်ချင်လို့လား ဆိုတာကတော့ တင်တဲ့သူပဲ သိမှာပါ။ အယ်ဒိတာများအနေနဲ့ ဒီလို ပို့စ်များကို ပြန်ပြီး စီစစ်သင့်တယ်လို့… ထင်ပါကြောင်း။